सेयरमा आत्मसमर्पण नगर्नुहोस् | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयरमा आत्मसमर्पण नगर्नुहोस्
एकजना शुभेच्छुकले सल्लाह माग्नुभयो– प्राथमिक बजारमा विशेषगरी लघुवित्तको सेयरमा धेरै पटक आवेदन गरेँ तर सेयर परेन । अब त भर्न पनि मन लाग्न छाड्यो । के गरौं ?
प्रिय लगानीकर्ता !
सबैभन्दा पहिला सल्लाह माग्नुभएकोमा धन्यवाद । सायद मैले पहिलो पटक यसरी जिज्ञासाको उत्तर दिँदै छु ।
सर्वप्रथम त सेयर बजारमा तपाईंको लगानी गर्ने चाहनाको म प्रशंसा गर्छु । यो कुरा मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । जब सेयरको संख्याभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन पर्छ भने सबैले सेयर पाउने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अनि बाँडफाँड चिट्ठा प्रणालीमा परिणत हुन्छ । चिट्ठा आफैंमा भाग्यको खेल हो । यसमा एउटै व्यक्ति धेरै पटक अभागी बनिरहन सक्छ । एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक–पटक । के धेरै पटक अभागी भइयो भनेर भर्न छाड्ने त ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न आउँछ ।
म भन्छु– भर्न छाड्नु भनेको अर्को अभागी हुनु हो । तपाईं, हामीले नभरे अरु कसैले भरिरहेकै हुन्छ । तपाईंले नभर्दा अर्कोपटक पर्न सक्ने सम्भावना अर्कोले हात पार्छ । हामीले भर्न छाड्दा अरुको भाग्य बलियो बन्दै जान्छ । मानौं तपाईंलाई १० कित्ता पर्न सक्थ्यो । कम्पनी राम्रो थियो । दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुँदा मूल्य एक हजारसम्म पुगेर कारोबार भयो । तर, तपाईंले भर्नु भएन । उक्त सेयर अर्कैलाई पर्यो । १० कित्ताको एक हजारका दरले १० हजार भयो । एक हजार लगानी कटाउँदा ९ हजार फाइदा हुन्थ्यो । तर, तपाईंले भर्नु भएन । अब भन्नुहोस्– तपाईंको नाफा कसले लग्यो ? पक्कै पनि जसले दिक्क नमानी सेयर भरिरह्यो, उसैले लग्यो ।
सेयर बजार पैसा र सम्पत्तिको समुद्र हो । संसारमा जति पनि मानिस धनी बनेका छन्, ती व्यवसाय, सेयर बजार र घरजग्गाबाट धनी बनेका छन् । अनि यसरी नै तपाईं हामीले लगानीमा आत्मसमर्पण गर्दै जाँदा उनीहरुको सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ । हामीले आफ्नो व्यवसायमा नछिरेर अरुको व्यवसायमा कामदार बन्दा व्यवसाय गर्नेहरुले अझ बढी धन थुपार्दै गएका छन् । अझ धनी बन्दै गएका छन् । यसकारण पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्– संसारमा ९० प्रतिशत मानिससँग जति सम्पत्ति छ, त्यति सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिससँग छ । अनि ती १० प्रतिशत मानिससँग सेयर छ, व्यवसाय छ या लगानी छ । हामी ९० प्रतिशतमा पर्नुको प्रमुख कारण जागिर, लगानी र व्यवसायमा फरक छुट्याउन नसक्दा हो ।
म सेयर तालिमका क्रममा सोध्ने गर्छु– जागिर दिने धेरै कि जागिर खाने ? उत्तर सजिलो छ । जागिर खाने नै धेरै हुन्छन् । जागिर दिने कम हुन्छन् । यसकारण पनि धनी कम र न्यून आय वा गरिब बढी हुने गर्छन् । यसैले पनि मेरो सल्लाह सेयर भर्नबाट आत्मसमर्पण नगर्नुहोस् ।
अर्कोतर्फ सेयर बजार यस्तो ठाउँ हो जहाँ पैसालाई काम लगाइन्छ । र, पैसासँग तपाईंमा भन्दा कयौँ गुणा बढी कमाउन सक्ने क्षमता हुन्छ । पैसामा तपाईंभन्दा बढी मेहनत गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । अनि हाम्रोभन्दा बढी कमाउने क्षमता भएको पैसालाई काम गर्न दिएनौं भने हामी कसरी पैसा बनाउन सक्छौं ?
वारेन बफेटलाई हेर्नुहोस् त ! पैसाको कमाउने क्षमता कति हुन्छ । पैसामा हाम्रोभन्दा कयौं गुणा बढी कमाउने क्षमता नहुने हो भने वारेन बफेटले ८८ वर्षको उमेरमा ८६ अर्ब डलर वा उनको उमेरबराबर अर्ब डलर जागिर खाएर कदापी कमाउन सक्ने थिएनन् । अर्कोतर्फ उनले पनि सेयर बजारबाट आत्मसमर्पण गरेको भए उनको अहिलेको अवस्था अवश्य संसारले देख्न सक्दैन थियो । लगानी छाडेर जागिर खाएको भए न विनोद चौधरीले कमाउन सक्थे ।
एकपटक केही कम्पनीका सेयरधनीको सूची लिएर उनीहरुको सेयर र मूल्यलाई गुणन गरेर हेर्नुहोस्, सेयरसँग रहेको पैसा कमाउने क्षमता त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ । आजभन्दा १० वर्षअघि कुनै लघुवित्तको १० कित्ता सेयर पर्ने कसैको सम्पत्ति कति भयो भनेर सामाजिक सन्जालमा प्रश्न राखेर सोधे पनि हुन्छ, अहिले कति लाख पुग्यो भनेर । वा कुनै कम्पनीको तथ्यांक लिएर आफैं हिसाब गरे पनि हुन्छ । त्यसबाट प्रस्ट हुन्छ, १० कित्तामा पैसा बन्ने कति तागत छ भनेर । र, म फेरि पनि भन्छु– तपाईंले भर्न छाड्नुभयो भने अरु कसैले भरिरहेको हुन्छ । तपाईंलाई पर्ने सेयर अरु कसैलाइ परिरहेको हुन्छ । तपाईंले कमाउने पैसा अरु कसैले कमाइरहेको हुन्छ । अनि मैले फेरि सोध्नुपर्ने हुन्छ– तपाईंको पैसा, सम्पत्ति कसले लग्यो ?
तपाईं प्राथमिक सेयर वा आईपीओमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो परिभाषा सेयरमा लगानी गर्न सुरु गर्ने र कम जोखिमयुक्त लगानी भनेको प्राथमिक निष्कासन हो । तर, यो परिभाषा नेपालमा मात्र लागू हुन्छ । विकसित देशमा यो परिभाषा भनेको बिल्कुलै उल्टो हो । अमेरिका तथा क्यानडा जस्ता विकसित देशमा प्राथमिक निष्कासनमा गरिने लगानीलाई धितोपत्रमा गरिने सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण लगानीको विकल्पको रुपमा राखिन्छ । किनकि कम्पनी टिक्ने वा नटिक्ने भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । प्रतिस्पर्धाबाट बाँच्ने हो कि होइन भन्नेमा शंकैशंका रहन्छ । यसकारण पनि हामी यति भाग्यमानी छौं कि विकसित देशमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिएको आईपीओ हाम्रो बजारमा कम जोखिमपूर्ण विकल्पका रुपमा लगानी गर्ने अवसर पाएका छौं ।
अर्कोतर्फ, कम्पनीले वर्षौं लगाएर बनाएको सम्पत्ति, नाफा, नाम सबैका लागि हामीले कुनै थप मूल्य नतिरी अंकित मूल्यमा किन्न पाएका छौं । हाम्रा कतिपय कानुन सञ्चालकका तर्फबाट हेर्ने हो भने कठोर छन् तर तपाईं हामीका लागि यी वरदान छन् । किनकि, हामी अंकित मूल्यमा सेयर भर्न पाइरहेका छौं । अनि केही दिनभित्रै दोस्रो बजारमा कयौं गुणा बढी मूल्यमा बेचेर छोटो समयमा सय, दुई सय, तीन सय प्रतिशत नाफा लिन पाएका छौं । योभन्दा बढी भाग्यमानी लगानीकर्ता संसारमा कमै होलान् ।
प्रविधिले हामीलाई ‘अन द गो’ मा पुर्याएको छ । यसको अर्थ जाँदा जाँदै, हिँड्दा हिँड्दै भन्ने हो । हिजोका दिनमा सबै काम छाडेर दिनभर सेयरको आवेदन दिन लाम लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट जाँदा जाँदै हातको मोबाइलबाट एक क्लिकमा सेयर भर्न पाएका छौं । एकपटक सोच्नुहोस्– यसका लागि कति समय लाग्ला ? बढीमा पाँच मिनेट । धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा भौंतारिने केही समय कटाएर भए पनि कम्पनीको अवस्था हेरेर आवेदन दिनुहोस् । आत्मसमर्पण नगर्नु होस् ।
पछिल्लाे - यातायात समितिलाई महासंघको उर्दी : पाँच दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता गर
अघिल्लाे - डोटीबाट ‘विप्लप’ समूहका कार्यकर्ता पक्राउ
प्रधानमन्त्री ओली अजरबैजान जाँदै | आयाक्सलाई हराउँदै चेल्सी समूहको शीर्षस्थानमा | १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा ५ जना कारागार चलान | मेसीको कीर्तिमानमा बार्सिलोनाको जित | राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता | विप्लव समूहद्वारा नेकपा नेतामाथि कुटपिट | ग्लोबल आइएमई बैंक र साउदी अरबको बैंक अलबिलादबीच रेमिट्यान्स सम्झौता | खारेजीमा परेका म्यानपावरबाटै ठगी | विद्याकुञ्ज इंग्लिस स्कुलको बार्दली भाँच्चिदा ३९ विद्यार्थी घाइते | फेवाताल संरक्षणका लागि होटल संघको एक लाख